Ithegi: intengiso yoluntu | Martech Zone
Ithegi: intengiso yentlalo
Nokuba upapasha iaudiyo okanye ividiyo, uyazi ukuba ngamanye amaxesha loo mxholo uyinxalenye elula. Yongeza ukuhlela kunye nokusebenza kweqonga ngalinye lentlalontle kwaye ngoku uchitha ixesha elininzi kwimveliso kunokuba urekhoda. Oku kuphazamiseka kungoko uninzi lwamashishini luthintela ividiyo nangona ividiyo iyindlela yokunyanzelisa. IPromo.com liqonga lokuyilwa kwevidiyo yamashishini kunye neearhente. Banceda abasebenzisi ukuba benze imixholo ebonakalayo kunye
I-infographic: Imbali emfutshane yeNtengiso yeendaba zeNtlalo
NgoMvulo, nge-1 kaJanuwari, 2018 NgoLwesine, Agasti 12, 2021 Douglas Karr
Ngelixa uninzi lwamajelo eendaba oluntu lucoca onke amandla kunye nokufikelela kwintengiso yemidiya yoluntu, iseyinethiwekhi ekunzima ukuyifumana ngaphandle kokukhuthaza. Intengiso yemidiya yoluntu yintengiso ebengekho kwiminyaka elishumi edlulileyo kodwa ivelise i-11 yezigidigidi zeerandi ngo-2017. Le nto ibinyuke isuka kwi-6.1 yezigidigidi zeerandi ngo-2013. Idatha yokuziphatha. Njengokuba,
IZymplify: Ukuthengisa njengeNkonzo yeShishini elincinci
NgoLwesine, Septemba 14, 2017 NgoLwesine, Septemba 14, 2017 Douglas Karr
Uphuhliso olukhawulezileyo, izikhokelo, kunye nokudityaniswa kuyaqhubeka ukubeka amaqonga kwintengiso ebonelela ngeempawu ezininzi ngeendleko eziphantsi kakhulu ngonyaka. IZymplify lelinye lala maqonga-iqonga lokuthengisa ngelifu elinikezela zonke iimpawu eziyimfuneko kwishishini elincinci lokutsala, ukufumana, kunye nokwenza ingxelo kwizikhokelo ezikwi-Intanethi. Nangona kunjalo, iyenzela into engaphantsi kuninzi lwamaqonga okuzenzekelayo kwintengiso kwintengiso. Ukusuka kwindawo: iZymplify
Impembelelo yeNtengiso yeDijithali yeNtengiso kwiiManyano zeMboleko kunye namaZiko ezeMali
NgoLwesibini, Februwari 21, 2017 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Umlingane uMark Schaefer usandula ukupapasha iposti, i-10 Epic Shifts ebhala kwakhona iMigaqo yokuThengisa, ekufuneka uyifundile. Wabuza abathengisi kulo lonke eli shishini ukuba intengiso itshintsha njani na. Indawo enye endibona kuyo yonke imisebenzi kukukwazi ukwenza ulwalamano lobuqu kunye nethemba okanye umthengi. Ndithe: Oku kuhamba kwedatha kunokuthetha “ukusweleka kwemithombo yeendaba kunye nokunyuka kwamava ekujoliswe kuwo, awenzelwe ukuthengisa ngeABM kunye